Umtshato ubaluleke kakhulu kuyo yonke intombazana. Emva koko, abafazi abatsha abavela kwiminyaka emi-5 baceba umtshato wabo. Lusuku olunjalo oluhle, olubaluleke kakhulu kwaye luhle kakhulu.
Elinye iqela sele liyazi indlela yokuchitha le mini engalibalekiyo .Abanye bakhetha ukugubha ngokuqhelekileyo kwindawo yokutyela kwaye batyikitye iofisi yokubhalisa. Abanye bafuna umkhosi wokuphuma kwindawo ethile kwindawo. Ngoku kuye kwafashisa ukulungiselela umtshato ngezindlela ezahlukeneyo. Ngoku kukho umxholo onjengesitayela somtshato. Ngoko kufuneka siqale kuphi? Umtshato ngesitayela sesiNgesi - awunakulinganiswa kwaye uthanda kakhulu. Umtshato uya kudlula kuphela kuphela xa kulungelelaniswe yonke indawo. Kukho iingcamango ezininzi ezahlukahlukeneyo zombutho womtshato kwisitayela sesiNgesi.
Iingcebiso kubasanda kutshata
Abathandi basele balinde, abayi kulinda le mini. Ewe, kungekudala umtshato, kodwa ukulungelelanisa oku kukhwankqisayo. Kufanelekile ukuthatha iingcebiso ezimbalwa zokuphepha ukuzenza iimpazamo. Baya kunceda ukugcina iingongoma ngaphambi komtshato.
Okokuqala, musa ukukhawuleza ukwenza iitafile kunye nezitya. Ewe, zizonwabile kwaye iindwendwe ziya kuvuyiswa kukutya okuninzi. Kodwa asimele sikhohlwe malunga nokuhlobisa. Kufuneka kube neengqungquthela zeziqhamo kwietafile. Kungaba zezibane zeetyala kunye neentyantyambo, izitya. Udinga imbali encinane okanye uyinike umyili kunye nomququzeleli. Amakhandlela nawo kubalulekile ekuhlobiseni. Ngobusuku bahlobisa ngokugqibeleleyo ukubhiyozela. Iimpawu ezintle kakhulu zokujonga iirase okanye eminye imibala.
Zonke iitafile kufuneka zibaleke. Sidinga ukunyamekela zethu iindwendwe. Kufuneka kubekho ikhadi elihlalweni lakhe etafileni. Bonke abazange badideke kwaye abazange baphume, befuna isihlalo samahhala. Sifanele sicinge malunga nokuba ngubani na apho aya kuhlala khona kwidili. Wonke umntu kufuneka anike imenyu yokudla, kwaye isipho siphezu kwayo. Yintoni eya kugqitywa kuphela ngabantu abatsha abasanda kutshata.
Kulo suku oluhle awukwazi ukulondoloza ngobuhle. Emva koko, kuya kuba njani ngokukhawuleza ukuba ufike kwi-limousine. Makube neebhola kunye neentyantyambo ezijikelezileyo kwiindwendwe, mazivuyiswe ngeli mini. Kufuneka ukuba uphuphe kwaye uphendule. Emva koko unokufumana isakhiwo esipheleleyo kwisitayela sesiNgesi.
Umtshato wesiNgesi ngeendlela ezahlukeneyo
Umtshato ngamnye kufuneka uzaliswe kunye naso. Kufuneka ufumane umtshato oya kuba ngowona. Yaye naziphi izithethe ezifanele zilandelwe? AmaNgesi ngabantu abagcinwe, ngoko ke yonke into kufanele ibe yindlela eqinile, kodwa ngokuluma. Izambatho akufanele zifumaneke kunye nobugcisa. Ubunono kunye nokuziqhelanisa zizinto eziphambili zomtshato wesiNgesi. Kuloo mthendeleko akukho ndawo yokugcoba kunye neyeposposakhe.
Umtshato wesiNgesi ngesitayela se "Babington blue". Ukugqwesa kwenkqubo kulubala obomvu. Izulu kunye nobumnene buluhlaza nje ukuphumelela iintliziyo zeendwendwe. Ubuluhlaza kufanele ibe intombazana, imenyu nganye kunye neentyantyambo kwiilafile.
Ngoku kuyimfuneko ukuwela umnqweno wetafile. Ngasentshonalanga, akusiko isiko ukubeka zonke izitya kwietafile kwangoko. Kukho iingoma ezintle zeentyatyambo kwiibhile, oku kwandisa ubuhle. Bonke abatyeleli kufuneka bakhethe oko uya kudla kunye nokusela. Ukutya kufuneka kuhanjiswe ngumlungiseleli kwitafile. Umbutho walo mzuzu ubaluleke kakhulu. Iintlobo zeentyatyambo zokulungisa imetafula.
Kubalulekile ukukhupha incwadi ekhethekileyo yeendwendwe, apho ungashiya umnqweno wakho kwimemori yeqabane elizayo.
Konke kukudibanisa imibala - obomvu obomvu kunye nohlaza oluhlaza. Kwaye iholo ledibano lidibene ngamacandelo amabini. Imibala inokukhethwa kunye nabanye, ukuthanda kwakho. Omnye umbala ubuqhakabhaka, omnye umtshakazi. Ngoko iholo lezonka lihlukaniswe ngamacandelo ahlukeneyo. Oku kuyimvelaphi kwaye inomdla.
Umtshato wesiNgesi waseKlasini
Umtshato ngesitayela yendabuko kwimbala ye-pastel. Akukho nto ekhutshwe ngayo kwaye ayiqakathekanga. Umbala ophezulu umhlophe okanye ukhilimu. Izinto eziphambili zomhlobiso zi-satin iibhande kunye nemicenge. AmaClassics ayikaze afumaneke kwifashoni. Kwamanye amazwe, umtshato awunqabile ukugubha kwivenkile yokutyela, ngokuqhelekileyo bakhetha izindlu zelizwe ezizolileyo ukuze zibambe umkhosi. Konke oku kulula ukuvelisa - ifenitshala, iintente, izixhobo kunye nemihlobiso. Iinkampani ezilungiselela ukutshata, bonke baya kuzizisa baze bazifake ngokwabo. Ukuphinda uvuselele iimoya esihle, iintyatyambo ezintle, iitrafethi, izixhobo zokukhangela, iirebhoni, njl njl. Ziya kuza kunceda.
Umtshato wesiNgesi ngosuku olushushu lwehlobo. Ithuba elihle lonyaka. I-markeee enhle kwilo hlobo ilima ukuloba kweholide. Lolu suku oluhle luya kuhlobisa ngeentyantyambo zasehlotyeni, izixhobo kunye neziphuzo eziqhakazileyo.
Kukho inkcubeko encinci - umyeni nomyeni kufuneka banikezele izikhumbuzo kwiindwendwe, eziza kubakhumbuza ngomtshato wabo. Simele sikhumbule ukuba umtshato kwisimboli sesiNgesi, ngaphezu kwakho konke, ukuxinwa nokuthintela. Umtshato kaNatasha wonke umtshakazi uya kuziva ngathi uyinkosikazi yangempela. Umtshato wakho ube ngumcimbi ongalibaleki kwaye ukhunjulwe ngobomi.
Yenza ilahleko zenzeke ngokukhulelwa
Isimo sezulu e-Abkhazia ngo-Agasti 2016 sichazwa yesikhungo se-hydrometeorological centre. Isiqhelo se-Abkhazia amanzi kunye nomoya wobushushu ngo-Agasti ngokuphononongwa
Ukuphatha ngokukhawuleza umqala wengqondo
Ukusetyenziswa kodlwengulo kumachiza omntu
I-Cream-soup evela kuma-eggplants kunye neetamatato ezibhakiweyo
Kutheni yonke into idinwe kwaye yintoni oyenzayo malunga nayo?